भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शरीरभरी गोबर दलेर सहर परिक्रममा, प्रहरी समेत डरायो — Imandarmedia.com
भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शरीरभरी गोबर दलेर सहर परिक्रममा, प्रहरी समेत डरायो
काठमाडाै‌। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका निमित प्रमुख राजेश कुशवाहलाई जनकारवाही भएको छ। सिके राउत नेतृत्वका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सडक कालोपत्रे नगरे भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शररिभरी गोबर दलेर अर्धनग्न बनाई नगर परिक्रमा गराएका हुन् ।
बिहीबार दिउँसो १२ बजे कुशवाह आफ्नो सरुवा अर्घाखाँची भइसकेकाले बिदाइको तयारी गर्दै थिए । ‘यहाँहरूको सहयोग र साथले नै तीन वर्षदेखि जनकपुरमा बसेर काम गर्न पाएँ । यहाँहरूको सहयोग र साथ मेरो जीवनमा स्मरणीय रहनेछ,’ कुशवाह भन्दै थिए । तर, त्यहीवेला सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता कार्यालयमा प्रवेश गरी हुलहुज्जत गरे ।
कार्यालयको तलै कोठादेखि तोडफोड गर्दै माथि पुगेका सयौँ कार्यकर्ताले लाठी, चिर्पट बोकेका थिए । उनीहरूले सरकारी पोसाकमा रहेका कर्मचारीहरूलाई खोजीखोजी कुटपिट गर्न थाले । केहीले ‘चोर, भ्रष्टाचारी तिमीहरूको यहाँ कुनै काम छैन’ भन्दै कर्मचारीलाई कुटपिट गर्दै टेबल, कुर्सी तथा दराजहरू तोडफोड गर्न थाले ।
केही कर्मचारीलाई कठालो समातेर माथिबाट तल झारे । ड्रेसमा रहेका कर्मचारी मनोज अधिकारी, मनसुदन साह, कृष्ण चौधरी, रामउचित साह र महेश यादवलाई कुटपिट गरे । मैले के अपराध गरेको छु, किन मलाई यसरी कुट्नुहुन्छ ? कृपया यसो नगर्नुस्’ भन्दै कुशवाह रोइकराइ गरे ।
उनीहरूसँग बिन्ती गरिरहे । तर, गुन्डा र आतंकी शैलीमा आएका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कुरा सुनेनन् । बरु उल्टै कुुशवाहले लगाएको टिसर्ट च्यातिदिए । कार्यालयपरिसर बाहिर ल्याएर कपडा फुकाल्न लगाई उनको जिउभरि हिलो र पानी हाल्दै घिसारेर प्रदेश सरकारको कार्यालयअगाडि सडकसम्म ल्याए ।
करिब पाँच सयको संख्यामा लाठी, चिर्पटसहित आएका जनमत पार्टीका कार्यकर्तासामु पिराडी चोकमा न्यून संख्यामा रहेका प्रहरीले केही गर्न सकेनन् । मूकदर्शक बनिरहे । बाटोभरि कुशवाह रोइकराइ गर्दा न त स्थानीयले उनको बचाउ गरे, न त प्रहरी प्रशासन नै आयो ।
लछारपछार गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा ल्याएपछि मात्रै प्रहरीले कुशवाहलाई उद्धार गरेको थियो । धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतले आफ्नो जिम्मा लिई कुशवाहलाई उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा लिएर सुरक्षित स्थानमा राखे ।
जनमत पार्टीका कार्यकर्ता कोणसभा गर्दै आ–आफ्नो घर जान थालेपछि मात्र प्रहरीले १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले घटनाको जानकारी पाएलगत्तै सुरक्षा बैठक राखे । बैठकले हुलहुज्जत गर्ने सबैलाई पक्राउ गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यसलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनमत पार्टीका ६२ जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले जनकपुरधामको बल्वा टोलसहित विभिन्न स्थानमा ढल व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
२२ करोडको लागतमा जनकपुरमा १९ किलोमिटरको नालाको ढल व्यवस्थापनका लागि नाला र ह्युमपाइप बिछ्याउने काम हुँदै छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ०७७ पुसदेखि सुरु भई अहिलेसम्म १७ किलोमिटर पूरा भइसकेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरका इन्जिनियर गंगाराम महतोले बताए ।
बल्वा टोलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको घर छ । उनको घर जाने बाटो ग्राभेल मात्र छ । सडक पिच गर्न भन्दै जनमत पार्टीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा दसैँअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले २५ असोजमा आयोजनालाई पत्र लेखेर सडकको मर्मत गरिदिन भन्यो । तर, उक्त योजनाअन्तर्गत सडक निर्माणको काम नरहेकाले र पक्की सडकको मात्रै मर्मतसम्भार गर्न सकिने स्टिमेटमा रहेकाले काम गर्न कठिनाइ भएको इन्जिनियर महतोले बताए ।
‘स्टिमेटमा त्यो सडक थिएन, तैपनि उपमहानगरपालिका र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले दुई–तीन टिपर ग्राभेल सडकमा हालिदियो । तर, सडक पिच गरिदिन दबाब आयो । हामीसँग त्यसका लागि बजेट थिएन ।
बाँकी काम उपमहानगरपालिकाले वा अन्य निकायसँग गराउनुस् भनेर उहाँहरूलाई हाकिम सा’बले भनेर दुई दिनअघि फर्काउनुभएको थियो । तर, बिहीबार दिउँसो एकैचोटि कार्यालयमा आएर तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात गरे ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जनताको समस्या नबुझ्ने भ्रष्टाचारी कुशवाहलाई जनताले जनकारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राउतले अख्तियारलाई समेत पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिँदा पनि भ्रष्टाचारीलाई कुनै कारबाही नभएपछि जनता आजित भएर जनकारबाही गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘अख्तियारलाई ज्ञापनपत्र दिएको कति भो ? तर, अख्तियारले भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने  ! उपमहानगरपालिका र खानेपानी विभागलाई ज्ञापनपत्र दिएको कति भो ? तर, सुन्दै नसुन्ने १ प्रहरीलाई उजुरी दिएको कति भो ? तर, उल्टा गरिब निमुखालाई समात्ने  ! अनि भ्रष्टबाट आजित जनताले के गर्छन्– जनकारबाही,’ राउतले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
जनमत पार्टीका धनुषा अध्यक्ष ओमविक्रम कुशवाहले जनताको काममा लापरबाही गरेकाले जनकारबाही गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ, जनताले तिरेको करबाट तलब खाने र जनताकै काममा लापरबाही र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई हामीले जनताको बीचमा ल्याएर नंग्याएका छौँ,’ उनले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरका प्रमुख राजेश कुशवाहमाथि सिके राउतका कार्यकर्ताले गरेको दुर्व्यवहारप्रति भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ । युनियनले अर्धनग्न बनाएर नगर परिक्रमा गराउनु गैरकानुनी र अराजकता भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन धनुषाका अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रले कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गल्ती गरेमा उसलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सिके राउतका कार्यकर्ताले कानुन नै हातमा लिएर गुन्डा शैली देखाउनु अराजकता भएको बताए ।एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि असैह्य घटना भएको छ । कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सजाय दिने धेरै निकाय छन् ।
तर, एउटा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो हातमा कानुन लिएर अराजकता गर्नु भएन ।भूमिगत शैलीमा कर्मचारीलाई हातपात र कार्यालयमा तोडफोड गर्नु उचित होइन । घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ।